China N'ogbe 500V 690V 125A Cylindrical Fuuz Holders ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Hawai
N'ogbe 500V 690V 125A Cylindrical Fuse Holders
Ndị a na-ejide ọkụ bụ ndị na-akwado fuuz nwere nha ruru 22X58mm. Ha nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru okpomọkụ kpatara site na akara ngosi dị ugbu a ma na-atụ anya mkpụmkpụ mmetụta dị ugbu a ruo 100KA. Ọ nwekwara ike ịrụ ọrụ dịka mgba ọkụ nkwụsị njikọ site na ngwakọta multiphase. Enwere ahịrị abụọ na / npụta na RT18N fuse base, na-enye ọrụ ịbelata ike. RTdị RT18L nwere mkpọchi nchebe iji kpọchie onye na-ebu ọkụ ọkụ mgbe a kwụsịrị iji zere ọrụ na-ezighị ezi; ọ nwekwara ike iji ihe ngosi, nke na-aga n'ihu mgbe njikọ fyss ahụ mebiri.
Gosiputa Insulate voltaji ruo 690V; Na-arụ ọrụ ugboro 50Hz AC; Ot free ikuku kwes ugbu a ruo 125A: Dabara na GB13539.1. GB13539.2, GB13539.6. GB14048.3 na IEC60269-1, IEC60269-2, IEC60269-2-1, IEC947-3.
Mgbe emechara plastic-injected case na kọntaktị na njikọ njikọ, a na-etolite ntọala site na ịgbado ọkụ ma ọ bụ na-agbapụta ma nwee ike ịhazi ọtụtụ. RT19 na-emeghe ihe owuwu, na ndị ọzọ bụ ihe ezoro ezo. E nwere ise fuuz nha dị ịhọrọ site na otu fiusi isi nke RT18N, RT18B, na RT18C. Enwere usoro abụọ maka ahịrị maka RT18N. Otu arụnyere na fuuz njikọ nke dị size. The ọzọ bụ a na-adịgide adịgide oghe kọntaktị na abụọ na-agbasa ihe. Ntọala dum nwere ike belata ike. A na-etinye ọdụ ụgbọ mmiri RT18 niile DIN okporo ígwè, nke RT18L so na ya nwere mkpuchi mkpọchi maka mgbochi ope-ezighị ezi na steeti na-agbasa.
Nke gara aga: N'ogbe 1P 2P 3P 4P DC mini circuit breakers mcb dc breaker dc mcb solar
Osote: Industrial akara IEC IP43 300A ụdị c cutout seramiiki fuuz njide
Industrial akara elu voltaji Drop-si fuuz c ...
Industrial akara IEC IP43 300A ụdị c cutout ...